MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » H.E. U Sein Oo presented Credentials to the King of Malaysia
by adminmofa on 22/08/2017 at 4:54 PM
U Sein Oo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to Malaysia, presented his Credentials to His Majesty Sultan Muhammad V, the Yang Di-Pertuan Agong XV of Malaysia on 17 August 2017, in Kuala Lumpur.
Dated. 22 August 2017
သံအမတ်ကြီး ဦးစိန်ဦး မလေးရှားနိုင်ငံ ဘုရင်မင်းမြတ်ထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်
မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးစိန်ဦး သည် ၎င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကွာလာလမ်ပူမြို့၌ မလေးရှားနိုင်ငံ ဘုရင်မင်းမြတ် ပဥ္စမမြောက် ဆူလ်တန် မူဟာမက် ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်